Amazon dia te-hifaninana amin'ny Apple Music sy Spotify | Avy amin'ny mac aho
Amazon dia manomana ny famoahana vaovao serivisy famandrihana streaming amin'ny mozika, Hoy ny tatitra nataon'ny Reuters. Ny goavana tech dia mamarana ny fahazoan-dàlana amin'ny serivisy toy izany, ary heno fa mety hanomboka izy faramparan'ity fahavaratra ity na fiandohan'ny fararano. Mazava ho azy, Amazon dia efa nanolotra serivisy mozika maimaim-poana ho an'ireo mpisoratra anarana Prime, saingy handany vola ity serivisy vaovao ity $ 9.99 isam-bolana, ary hanolotra a katalaogin'ny fifaninanana be lavitra noho ny mpifaninana aminy, mametraka Apple Music sy Spotify amin'ny tady.
Na dia hiditra tara amin'ny fidirana amin'ny mozika aza i Amazon, mino i Amazon fa ny fananana serivisy mozika feno dia zava-dehibe amin'ny tolo-kevitr'izy ireo ho fivarotana iray tokan-trano, araka ny loharanom-baovao ihany. Ny fanolorana mozika vaovao dia natao ihany koa hampitomboana ny antso avoakan'ny Amazon Prime, ary Amazon Echo.
Ny hetsika hanombohana serivisy miaraka amin'ny zon'ny mozika feno dia misy dikany, raha jerena ny fihetsiky ny Amazon tato anatin'ny volana vitsivitsy. Tao anatin'ny ezaka fanatsarana ny tolotra nomeny, ny mpivarotra ambongadiny tamin'ny volana aprily dia nanolotra a serivisy horonantsary tsy miankina amin'ny vidin'ny 9 $ / volana.
Apple Music dia natomboka tamin'ny volana Jona tamin'ny taon-dasa tao amin'ny 2015 WWDC, ary antenaina fa hisy fanavaozana lehibe ao amin'ny Androany WWDC. Mahita azy manokana aho lesoka betsaka amin'ny Apple Music raha ampitahaintsika amin'ny Spotify izy io, izay misy akany mpampiasa tsy manjavozavo izay ampidiriko ny tenako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Amazon dia te-hifaninana amin'ny Apple Music sy Spotify